"Ukuqhaqhayisa" (ukuya kwi-Embrace) Ukubambisana kwetenzi lwesiFrentshi
"Yamkele" Esi sifundo esilula kwiiNgqungquthela zesiLwimi zesiFrentshi
Isenzi sesenzi sesiFrentshi sithetha "ukumbamba" okanye "ukumanga." Kufana nesiNgesi kwenza kube lula ukukhumbuza kwaye kuyimfuneko ebalulekileyo yesiFrentshi "uthando" .
Xa ufuna ukuthetha "ukuvuma" okanye "ukumanga," isenzo sokudibanisa siyadingeka . Isifundo seFrentshi esheshayo siya kukubonisa indlela eyenziwe ngayo.
Ukudibanisa isiNgesi sesiLwimi sesiFrentshi
I- embrasser iqhelekileyo -Izenzi izenzi kwaye ilandela isenzo somntu oqhelekileyo.
Iziphelo ezingapheliyo zifana nezo zizenzi ezifanayo ezifana nombongi ( ukuzithanda ) , umdaka (ukuthandaza) kunye nabanye abaninzi. Oku kwenza isifundo ngasinye isenzo esilula kunokuba siphezulu.
Xa sidibanisa, kufuneka siqale siqaphele isenzi sesenzi. Kwimeko yokumbumbana , oko kukuvuma . Kule nto, iziphelo ezahlukeneyo zongezwa ukufana nomhla, ngokuzayo, okanye ukungafezeki kwexesha elidlulileyo. Sekunjalo, ngesiFrentshi, kufuneka sithathe ingqalelo nesigama sesivakalisi . Ngokomzekelo, " ndiyamkela " " ndiyambesa " kwaye "siya kumanga" ngu " sisi emrasserons ."
ndiyakhupha embrasserai embrassais
zivuma embrasseras embrassais
ndiyakhupha ukudibanisa zixhamle
iigrafu iibrasserons ukuxhamla
bhala bhala embrassiez
ukuxhamla embrasseront bhinqa
Ukuthatha Inxaxheba Kwangoku I-Embrasser
Umntu okhoyo njengamanje we- embrasser yenziwe ngokukongeza isenzi-isenzi kwisenzi esenza ukuba sikhuphe.
Oku kuncedo nje ngokuba akusiyo isenzi kuphela, kodwa kunokusebenza njengesigqibo, i-gerund, okanye isibizo kwezinye iimeko.
Indlela eqhelekileyo yokubonisa ixesha elidlulileyo ngesiFrentshi yi- compé passé . Ukwakhiwa, kufuneka udibanise isenzi esincinci ukuba ufanelane nesigama sesigxina, uze uqhotyoshelise i-embrassé yangaphambili .
Ngokomzekelo, "ndamkela" ngu "I embrassé " kwaye "siyamanga" ngu " siyakubamba ." Phawula indlela inxaxheba ethatha inxaxheba ngayo inye kwaye i- ai kwaye i-conjugates ye- poss .
Uluhlu olulula ngakumbi lokuqhawula
Phakathi kwezinto ezilula zokudibanisa, abafundi beFransi kufuneka bagxininise kwixesha elizayo, elizayo nelidlulileyo. Xa ulungele, yongeza ezi zifom zezenzi kwisigama sakho.
Xa isenzi sesenzo sinezinga elithile lokungaqiniseki okanye ukuxhomekeka, sebenzisa ngokuzithoba okanye ngesimo sengqondo esenziweyo . Ngokubhaliweyo, i-subjec elula okanye engaphelelanga ingasetyenziswa.
ndiyakhupha embrasserais bhala embrassasse
zivuma embrasserais iigrassas iigrafasses
ndiyakhupha ukuxhamla zixhamla ukuxhamla
ukuxhamla iigraferions embrassâmes ukudibana
ukuxhamla ukuxhamla ukuxhamla ukuxhamla
Ukuvakalisa umbukiso ngomyalelo ochanekileyo okanye isicelo, ifom yesenzo esisetyenzisiweyo isetyenziswa. Kule meko, isivakalisi sesifundo asifunanga. Yigcine imfutshane kwaye ithambile " ngokugubungela " kunokuba " udibanise .
Izibambiso zesiLwimi zesiTali: Lasciare
Iprofayile yomSebenzi weMpilo yoMzimba
Amaxesha ama-20 xa i-Karma yayinokukhawuleza kunye ne-Hilarious
Zo kuzalwa zeAgasti